Haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland ayaa qabatay shabakad katirsan Al-Shabaab oo qaabilsanaa dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Kismaayo. - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandHaayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland ayaa qabatay shabakad katirsan Al-Shabaab oo qaabilsanaa dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Kismaayo.
November 21, 2019 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Shabakada katirsan Al-Shabaab oo ay soo qabteen Haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland. [Isha Sawirka: Jubbaland TV]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland ayaa qabatay shabakad katirsan Al-Shabaab oo qaabilsanaa dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Kismaayo.
Howlgalka oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay labo kamid a shabakada katirsan Al-Shabaab, sida ay sheegeen masuuliyiinta haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland.
Sidoo kale waxyaabaha qarxa oo ay ku jiraan todobo bumbada gacanta ah ayaa laga helay hoyga shabakada.
Taliyaha haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland Khaalid Shiikh Cali ayaa sheegay in soo qabashada shabakada katirsan Al-Shabaab ay qabashadooda gacan ka siiyeen dad weynaha magaalada.
Kismaayo oo xarun kumeelgaar ah u ahayd maamul goboleedka Jubbaland tan iyo sanadkii 2013 ayaa xasiloonayd inkastoo sanadkan 2019 ay la kulantay qaraxyo iyo dilal qorsheysan.
Garoowe-(Puntland Mirror) Baarlamaanka Puntland ayaa ansixiyay miisaaniyada 2018, sida uu ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamaanka. 50 xildhibaan ayaa kasoo qeybgalay kulanka maanta oo Khamiis ah ka dhacay caasimada Garoowe, 47 xildhibaan ayaa ogolaaday in la ansixiyo [...]